ခင်မင်ရ င်းနှီးမှုကို အကြောင်းပြပြီး သူစိမ်းေ ယာကျာ်းရဲ့ထိ ကပါးရိက ပါးလုပ်ပြီး ပွေ့ဖက်နှုတ် ဆက်တာကို သည်းမခံနို င်ကြောင်း ပြောလာတဲ့ ခင်ရှုပ – Shwe Likes
ခင်မင်ရ င်းနှီးမှုကို အကြောင်းပြပြီး သူစိမ်းေ ယာကျာ်းရဲ့ထိ ကပါးရိက ပါးလုပ်ပြီး ပွေ့ဖက်နှုတ် ဆက်တာကို သည်းမခံနို င်ကြောင်း ပြောလာတဲ့ ခင်ရှုပ
Shwe | May 15, 2022 | Celebrity | No Comments
သရုပ်ေ ဆာင်နဲ့ မော်ဒယ်လ် ခင်ရူပ ကတော့ အသက် (၁၄) နှစ်အရွယ်ကတည်းက အလှမယ်ပြိုင်ပွဲတွေမှာ ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သူဖြစ် ပြီး Miss Tourism Beauty Pageant 2011 ပြိုင်ပွဲကြီး မှာ Winner တစ်ယောက်အဖြစ် လူသိများေ ကျာ်ကြားခဲ့သူဖြစ်ပါ တယ်။
ခင်ရူပက အိမ်ထောင်ကျြ ပီးနောက်ပိုင်း အနုပညာ အလုပ်တွေကို ရပ် နားလိုက်ပြီး သူမရဲ့ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးအလုပ်နဲ့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူရဲ့ အလုပ်တွေကို ကူညီလုပ်ကို င်ရင်း တည်ငြိမ်တဲ့ ဘဝတစ်ခုကို ဖြတ်သ န်းနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
အိမ်ထောင် သည်အမျိုး သမီးဖြစ်တဲ့ ခင်ရူပဟာ ဒီကနေ့မှာတော့ သူမနဲ့ခင်မင် ရင်းနှီးတာ ကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး ထိကပါးရိက ပါးမပြုလုပ်ဖို့ သတိပေး လာခဲ့ပါတယ်။ ခင်ရူပက “တချိူ့ အမျိုးသား များရှင် ကျမခင်တတ်ပါတယ်.. မရိုင်းတတ်ပါဘူး ဒါမယ့်နှုတ်ဆ က်ရင် ထိကပါးရိက ပါးကိုင် တာတွေ ပွတ်တာတွေ လုံးဝ အဆင်ပြေမနေ ပါဘူးနော်။
ကျမဘယ်လို ဘဲဝတ်ဝတ်ရှင် တို့ ထိခွင့်မ ရှိပါဘူးနော်! ဒါကျမလွတ် လပ်ခွင့်ပါ။ ဖက်တာလည်း မကြိုက်ပါဘူး ဒီတိုင်းခင် မင်ရင်းနှီးစွာမဖက်မ ထိဘဲ နှုတ်ဆက်ပါ.. စိတ်အရမ်းအခ န့်မသင့်လာရင် ဆွဲထိုးပါမ ယ်နော်။
ဆိုရှယ်ကျ မနေဘူးနော် သိဖို့က ကိုယ်လည်း သူများလင်ဆို အရမ်း ဆင်ခြင်တယ် ဘယ်လောက်ခင်ခင် သတိအရမ်းထားတယ်။ ပြီးတော့အို ကြီးအိုမချော လှလည်းမနေ ကြဘူး .. သူငယ်အဆင်အေ တာင့်အဖြော င့်ဆိုလည်း ဟုတ်သေး 🙃” ဆိုပြီး သူမရဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာမှာ ရေးသားလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ခင်ရူပကတော့ သူမကိုယ်တိုင်လည်း သားမယားရှိတဲ့ အမျိုးသားေ တွနဲ့ ခင်မင်ရင်လည်း ဆင်ခြင်သလို သူမအပေါ်ကိုလည်း လေးစား မှုရှိဖို့ ပြောလာ တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Source: Khin Yupa ‘s fb
သ႐ုပ္ေ ဆာင္နဲ႔ ေမာ္ဒယ္လ္ ခင္႐ူပ ကေတာ့ အသက္ (၁၄) ႏွစ္အရြယ္ကတည္းက အလွမယ္ၿပိဳင္ပြဲေတြမွာ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သူျဖစ္ ၿပီး Miss Tourism Beauty Pageant 2011 ၿပိဳင္ပြဲႀကီး မွာ Winner တစ္ေယာက္အျဖစ္ လူသိမ်ားေ က်ာ္ၾကားခဲ့သူျဖစ္ပါ တယ္။
ခင္႐ူပက အိမ္ေထာင္က်ျ ပီးေနာက္ပိုင္း အႏုပညာ အလုပ္ေတြကို ရပ္ နားလိုက္ၿပီး သူမရဲ့ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရးအလုပ္နဲ႔ ခင္ပြန္းျဖစ္သူရဲ့ အလုပ္ေတြကို ကူညီလုပ္ကို င္ရင္း တည္ၿငိမ္တဲ့ ဘဝတစ္ခုကို ျဖတ္သ န္းေနတာပဲျဖစ္ပါတယ္။
အိမ္ေထာင္ သည္အမ်ိဳး သမီးျဖစ္တဲ့ ခင္႐ူပဟာ ဒီကေန႔မွာေတာ့ သူမနဲ႔ခင္မင္ ရင္းႏွီးတာ ကို အခြင့္ေကာင္းယူၿပီး ထိကပါးရိက ပါးမျပဳလုပ္ဖို႔ သတိေပး လာခဲ့ပါတယ္။ ခင္႐ူပက “တခ်ိဴ႕ အမ်ိဳးသား မ်ားရွင္ က်မခင္တတ္ပါတယ္.. မရိုင္းတတ္ပါဘူး ဒါမယ့္ႏႈတ္ဆ က္ရင္ ထိကပါးရိက ပါးကိုင္ တာေတြ ပြတ္တာေတြ လုံးဝ အဆင္ေျပမေန ပါဘူးေနာ္။
က်မဘယ္လို ဘဲဝတ္ဝတ္ရွင္ တို႔ ထိခြင့္မ ရွိပါဘူးေနာ္! ဒါက်မလြတ္ လပ္ခြင့္ပါ။ ဖက္တာလည္း မႀကိဳက္ပါဘူး ဒီတိုင္းခင္ မင္ရင္းႏွီးစြာမဖက္မ ထိဘဲ ႏႈတ္ဆက္ပါ.. စိတ္အရမ္းအခ န႔္မသင့္လာရင္ ဆြဲထိုးပါမ ယ္ေနာ္။
ဆိုရွယ္က် မေနဘူးေနာ္ သိဖို႔က ကိုယ္လည္း သူမ်ားလင္ဆို အရမ္း ဆင္ျခင္တယ္ ဘယ္ေလာက္ခင္ခင္ သတိအရမ္းထားတယ္။ ၿပီးေတာ့အို ႀကီးအိုမေခ်ာ လွလည္းမေန ၾကဘူး .. သူငယ္အဆင္ေအ တာင့္အေျဖာ င့္ဆိုလည္း ဟုတ္ေသး 🙃” ဆိုၿပီး သူမရဲ့ ေဖ့စ္ဘုတ္စာမ်က္ႏွာမွာ ေရးသားလာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
ခင္႐ူပကေတာ့ သူမကိုယ္တိုင္လည္း သားမယားရွိတဲ့ အမ်ိဳးသားေ တြနဲ႔ ခင္မင္ရင္လည္း ဆင္ျခင္သလို သူမအေပၚကိုလည္း ေလးစား မႈရွိဖို႔ ေျပာလာ တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ Source: Khin Yupa ‘s fb
ပြည်ပနိုင်ငံမှာ မော်ဒယ်လ် အဖြစ်ရပ်တည်နေပြီဖြစ်တဲ့ စမိုင်းလ် ရဲ့ သမီးကြီးပေါ်ရှာ ရဲ့ အမိုက်စား ကကွက်ေ တွ(ရုပ်သံ)
သားဖြစ်သူ ပြန်လာချိန်မှာ ကျန်းမာရေး မကောင်းတာမြင်ပြီး စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားမှာ စိုးရိမ်နေတဲ့ ပိုင်တံခွန်ရဲ့မေမေ အကြောင်းပြောပြခဲ့တဲ့ အစ်မဖြစ်သူ
ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ အမိုက်စားပုံစံလေးနဲ့ ခပ်ချေချေ ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုကို ပရိသတ်ကြီးအားပြသလိုက်တဲ့ သရုပ်ဆောင်ဝတ်မှုံရွှေရည်